B-Gaa - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
ụdịdị dị iche iche School > Mụta + Discover > B-Flow
Mụta + chọpụta
(Ọganihu Nke Abụọ Dị Iche Iche)
Ònye ka m bụ? Kedu ihe m nwere ike ime? Kedu ihe m chọrọ? Ịchọta ihe talent gị dị oke mkpa. Anyị na anyị na-achọ ya!
Ị na-agbaso ihe omumu na ọkwa dị elu. Ị nwere uto dị iche iche ma chọpụta talent gị. Ị na-amụta na nkwụsị gị ma nata nduzi a na-eji akwa. N'ụzọ dị otú a, ị na-eme nhọrọ nyocha nke ziri ezi maka akara ngosi 2!
Ị nwere ike ịgbaso ụzọ a campus Plantin.
Na anyị Mbụ Nke mbụ Degree B na-asọba na mgbakwunye na agụmakwụkwọ izugbe, ị ga-arụ ọrụ dabere na Nkà na ụzụ. You nwekwara ike ịhọrọ site na modul Nlekọta / ntutu isi, okike, Mmepụta, Nri & Azụmaahịa N'afọ nke abụọ, na mgbakwunye na nkuzi niile, ị na-ahọrọ nhọrọ bụ isi: AKWEKWỌ VOTE (Osisi, Igwe ọkụ & ọkụ eletrik) na SOCIETY & WELL-BEING (Nlekọta ntutu, Nlekọta & Nri)
Gụkwuo banyere ụzọ anyị si arụ ọrụ na Ịmụta + Ịchọpụta na OZI OZI.
Oge nke abụọ nke usoro STEM
Oge nke abụọ nke Society & Welfare
Na Afọ 1e nke B ị nweta nnukwu akụkụ nke akwụkwọ agụmakwụkwọ niile bụ otu maka onye ọ bụla. Ị ga-arụ ọrụ na Techniek na n'ime Art & Culture. Ị nwekwara ike ịhọrọ site na nhọrọ Care / Hair Care, Creation, Industry, Nutrition & Trade. Ị na-agbaso modul electrọn 2 kwa oge n'otu ehihie n'izu.
N'ime Usoro ị gafere ọrụ na gburugburu iji mee ihe dị iche iche onwe gị, mgbe niile dịka usoro dị iche iche nke usoro nhazi.
N'ime Art & Culture ị mụtara ịchọta ihe ndị ị nwere ike ịmepụta ma zụlite ha site na isiokwu dị mma. Ị ga-enwekwa onwe gị!
Ihe efu 1B (.pdf, 127KB)
STEM guzo maka Sayensi, Nkà na ụzụ, Injinia na mgbakọ na mwepụ. Na nhọrọ nkiti 2B Usoro STEM gị na onye nkuzi gị ga-achọ ịchọpụta ma zụlite nkà gị n'ime usoro STEM. Nke a dị n'ime onodu Eletrik, Mechanik & osisi
Pịa ebe a maka ibe ọzụzụ zuru ezu na tebụl nkuzi
Na nhọrọ nkiti 2B Society na Welfare ọdịmma mmadụ na nke ndị mmadụ bụ ihe dị mkpa n’etiti ọha mmadụ. Ga-amata ọtụtụ echiche na usoro iji bulie ma jigide ebikọ ọnụ, ahụike gị na ụdị ndụ gị na ọha mmadụ dị iche iche. Nke a dị n'ime onodu Nlekọta ntutu, Nlekọta & Nri
Ọ bụrụ na ị gafere na klas mbụ B-eruba, ị nwere ike ịgbanwee niile ọzụzụ n'ime BSO. Ị na-eche mma ọma banyere ma ụzọ ị na-eche zuru ezu na ma ị nwere mkpa ihe ọmụma.
> Chọpụta ihe ọmụmụ 2 degree n'ụlọ akwụkwọ anyị.
> Chọpụta ihe ọmụmụ niile 2e.
Ị na-amụta ihe campus Plantin na Borgerhout.
Ị nwere ike ịbanye na bọs 20 - bọs 21 - bọtịnụ 30 - 34 bus
Deputy Director Learning + Discover